Tweed-New Haven Airport mankany Tampa sidina amin'ny Avelo Airlines izao
Home » Lahatsoratra farany farany » Airlines » Tweed-New Haven Airport mankany Tampa sidina amin'ny Avelo Airlines izao
Airlines • Airport • Aviation • Vaovao momba ny fitsangatsanganana • Fitsangatsanganana an-trano • Karaiba • Vaovao • People • Tourism • Fitaterana • Fanavaozana ny tanjon'ny dia • Travel Wire News • Etazonia Vaovao Vaovao
Avelo Airlines miainga amin'ny seranam-piaramanidina Tweed-New Haven (HVN).
Nanomboka ny serivisy avy any amin'ny tobin'ny morontsiraka atsinanana ao amin'ny HVN ny Avelo Airlines tamin'ny alarobia 3 Novambra tamin'ny sidina voalohany ho any Orlando. Tampa Bay no fahatelo amin'ireo toerana enina malaza any Florida izay atolotry ny Avelo Airlines avy amin'ny HVN.
Ity serivisy amin'ny fiaramanidina Boeing Next Generation 737-700 ity dia miasa amin'ny alatsinainy, zoma ary asabotsy.
Ny sidina dia miainga HVN amin'ny 2:30 hariva tonga TPA amin'ny 5:25 hariva
Ny sidina miverina dia miainga TPA amin'ny 6:15 hariva tonga HVN amin'ny 9:00 alina
Avelo Airlines dia hiakatra any amin'ny toerana fahatelo any Florida anio avy ao amin'ny seranam-piaramanidina Tweed-New Haven (HVN) - Tampa Bay.
“Faly be izahay handeha ho any amin'ny toerana fahatelon'i Avelo any Florida anio tolakandro”, hoy ny Filohan'ny Avelo sy Tale Jeneralin'ny Avelo Andrew Levy. “Manamora sy manamora kokoa ny fahatongavan'ireo mponin'i Southern Connecticut ao Tampa izahay. Miaraka amin'ny saran-dalana tena ambany dia ambany, Tampa sy ireo toerana dimy hafa milentika amin'ny masoandro any Florida izay tompoin'i Avelo dia lafo kokoa noho ny hatramin'izay.
Ity serivisy amin'ny fiaramanidina Boeing Next Generation 737-700 ity dia miasa amin'ny alatsinainy, zoma ary asabotsy. Ny sidina dia miainga HVN amin'ny 2:30 tolakandro tonga TPA amin'ny 5:25 hariva Ny sidina miverina miainga TPA amin'ny 6:15 hariva tonga HVN amin'ny 9:00 alina
"Ny fiaingana voalohany anio ho an'ny Tampa Bay dia dingana iray hafa mampientam-po amin'ny fiaraha-miasa mitombo haingana amin'i Avelo eto amin'ny HVN," hoy i Sean Scanlon, Tale Mpanatanteraka ao amin'ny Tweed-New Haven Airport. "Ny angovo eto amin'ny seranam-piaramanidina sy ny fiaraha-monina tato anatin'ny andro vitsivitsy dia tsy mampino raha nanomboka ny vanim-potoana vaovao sy mavitrika kokoa ao amin'ny HVN."
Avelo Airlines Nanomboka ny serivisy avy amin'ny tobin'ny morontsiraka atsinanana ao amin'ny HVN ny alarobia 3 Novambra tamin'ny sidina fanokanana ho any Orlando. Tampa Bay no fahatelo amin'ireo toerana enina malaza any Florida Avelo Airlines miasa avy amin'ny HVN. Ho fanampin'ny Fort Lauderdale (izay nanomboka ny serivisy tamin'ny zoma lasa teo), Orlando sy Tampa Bay, Avelo dia hanomboka hanidina mankany Fort Myers, Palm Beach ary Sarasota amin'ny andro sy herinandro ho avy.
Eo anivon'ny vahoaka, ny filaharana lava, ny dia lavitra ary ny fitohanan'ny fifamoivoizana any amin'ny seranam-piaramanidina hafa idiran'ny mpandeha an'i Connecticut, ny HVN dia manolotra traikefa amin'ny seranam-piaramanidina hafa mamelombelona sy tsotra. Ny akaikin'ny HVN amin'ny làlambe lehibe sy ny lalamby commuter dia mahatonga azy io ho seranam-piaramanidina mety sy mora idirana indrindra ao Connecticut.
Avelo no zotram-piaramanidina voalohany manolotra sidina tsy an-kiato eo anelanelan'ny HVN sy Florida. Ny fahatongavan'i Avelo ao amin'ny HVN ihany koa dia manamarika ny fanitarana ny serivisy lehibe indrindra ao amin'ny HVN tao anatin'ny 30 taona mahery. Avelo dia mampiasa vola 1.2 tapitrisa dolara hanampiana amin'ny fanavaozana sy fanavaozana ny fotodrafitrasa sy ny asa ho ampahany amin'ny tetikasa 100 tapitrisa dolara amin'ny HVN. Ny fanitarana ny seranam-piaramanidina dia ahitana ny terminal vaovao sy ny lalamby fanitarana tarihin'ny mpandraharaha seranam-piaramanidina Avports.
Tao anatin'ny 90 andro izay, Avelo dia nandray mpiasa maherin'ny 85 ao amin'ny HVN (izay iantsoan'ny zotram-piaramanidina ny mpiasany), ao anatin'izany ny mpiasan'ny sidina, ny mpanamory, ny solontenan'ny mpanjifa amin'ny seranam-piaramanidina, ny andraikitra mifandraika amin'ny asa, ary ny mpitantana sy ny mpanara-maso. Avelo sy HVN dia manantena ny hanana matihanina amin'ny fiaramanidina maherin'ny 100 monina eny amin'ny seranam-piaramanidina amin'ny faran'ity taona ity.